पीडित परिवारलाई न्याय देऊ – Chitwan Post
पीडित परिवारलाई न्याय देऊ
प्रकाशित मिति: मङ्लबार, साउन २९, २०७०
तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला गोरखाको फुजेलबाट पूर्वी चितवनको जयमङ्गलामा रहेका हजुरबा–हजुरआमा भेट्न आएका कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई माओवादीले सुराकीको आरोपमा अपहरण गरेर हत्या ग¥यो । २०६१ साल जेठ २४ गते हत्या गरेपछि सोही दिन बेलुकी माओवादी कार्यकर्ताहरुले रत्ननगर–१, बकुलहरमा कोणसभा गरी सुराकी गरेको कसुरमा सफाया गरिएको जनाएका थिए । हत्यालगत्तै कृष्णका दाइ नुरप्रसादले माओवादी आरोपको खण्डन गर्दै आफ्ना भाइ एसएलसी परीक्षा दिएर हजुरबा–हजुरआमा भेट्न आएको र उनी निर्दोष रहेकाले भाइका हत्यारालाई कारबाही माग गर्दै न्याय दिलाइदिन मानवअधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीसँग अपिल गरेका थिए । नौ वर्षअघिदेखि निर्दोष व्यक्ति मार्नेमाथि कारबाहीका लागि भौँतारिएका अधिकारी परिवारले न्याय पाएनन् । उल्टै उनको परिवारलाई सरकारले मानसिक रोगी भनेर ३५ दिनसम्म अस्पताल पु¥याएर यातना दिने काम ग¥योे । नातिकै सन्तापले एकोहोरिएका हजुरबा घनप्रसादको गत वर्ष मृत्यु भयो । हजुरआमा गौरीमाया नाति सम्झिएर भक्कानिँदै न्यायका लागि बिलौना गरिरहेकी छन् ।
अधिकारी परिवारले तत्कालीन माओवादी नेता तथा कार्यकर्तामाथि किटानका साथ हत्या गरेको आरोपसहित मुद्दा दर्ता गराएका थिए । हत्यारामाथि कारबाहीको माग गर्दै २० दिनदेखि आमा गङ्गामाया र बाबु नन्दप्रसाद अधिकारीले आमरण अनशनमा बसेपछि दुवैैको स्वास्थ्य स्थिति चिन्ताजनक भएको थियो । अनशनकारी दम्पतीको पिसाबमा समेत रगत देखिने समस्या भएपछि वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा राखिएको थियो । स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गर्न नदिएका अधिकारी दम्पतीले पानीसमेत नपिएपछि स्वास्थ्यकर्मी पनि अत्तालिएका थिए । अनशनकारीको नाजुक अवस्थाबारेमा सञ्चारमाध्यममा खबर आउन थालेपछि अधिकारवादीहरुले उनीहरुको मागमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । न्यायालयका प्रधानन्यायाधीश स्वयं नै सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला पनि अनशनकारीले अन्यायमा परेकाको न्यायका लागि प्राण त्यागै गर्ने अवस्था आउँदासम्म पनि ध्यानाकर्षण हुन नसक्नु दुःख लाग्दो विषय भएको छ ।
कानुनी राज र अन्यायमा परेकाको न्याय सम्पादन गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो । सरकारले द्वन्द्वकालका मुद्दाहरुलाई सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयोगबाट छिनोफानो गर्ने बताएको थियो । तर, अन्यायमा परेका परिवारलाई मेलमिलाप आयोगले मलम लगाउन सकेन । सरकार मुलुक शान्ति प्रक्रियामा अघि बढेको सन्दर्भ मात्र देखाएर पन्छिरहने, निर्दोष नागरिकले अनाहकमा मर्नुपर्ने र पीडितका परिवारले न्यायकै लागि आफ्नो प्राणसमेत आहुति दिनुपर्ने नियतिको समाधान कहिले हुन्छ ? द्वन्द्वका नाममा अपराधीले राजनीतिक आड लिएर नेतृत्व गरिरहने र नागरिक भने न्यायका लागि जीवनपर्यन्त पलपल मरेर बाँचिरहने ? सरकारले सहिद तथा घाइते परिवारबीच तत्कालका लागि सहमति पनि गर्ने र गरेका सहमति कार्यान्वयन नगर्ने संस्कारको अन्त्य नभई पीडित नागरिकलाई राहत हुनेछैन, बरू थप आहत हुनेछन् । यसतर्फ न्याय सम्पादन गर्ने न्यायमूर्तिको नेतृत्वको सरकारले बेलैमा सोच्नु आवश्यक देखिएको छ ।
१९ हजार बढि चल्ला नष्ट
शनिबार बजार खुलाउन आग्रह